Kempo – Taom-pilalaovana 2019: hanomboka rahampitso ny fiofanana | NewsMada
Kempo – Taom-pilalaovana 2019: hanomboka rahampitso ny fiofanana
Voarafitra tamin’ny fiatombohan’ity herinandro ity ny fandaharam-potoanan’ny Kempo Madagasikara ho amin’ny taona 2019. Hosokafana amin’ny dingana voalohany, amin’ny fifampizarana sy fanomezana fiofanana ireo mpitarika mpanampy, rahampitso 8 desambra ho avy izao izany, raha ny tatitra nataon’ny filohan’ny komity mpitantana ny Kempo sy ny MMA (Mixed Martial Arts) eto Madagasikara. Hitohy any Ambositra, ny 21 sy 22 desambra izao izany fampiofanana izany. Ity farany izay fanombohana amin’ny fampidirana ny Kempo sy MMA any amin’ny faritra Ambositra iny. Ankoatra an’Ambositra, efa maro ireo faritra mangataka fiaraha-miasa amin’ny fifampizarana toy izao, toa an’i Vaingaindrano sy Farafangana.
Hiditra amin’ny dingana faharoa amin’ny fampiofanana ireo mpitarika mpanampy ny volana febroary 2019.Ho an’ny mpitarika, fiofanana roa no hatrehin’izy ireo, ny taona 2019, dia ny volana mey sy ny volana jiona. Hisy ny fitsapam-pahaizana hatao ao aorian’ny fampiofanana izay omen’ny manam-pahaizana.
Eo amin’ny lafiny fifaninanana kosa indray, ny lalao eo amin’ny samy klioba, mivondrona sy mitsangana eo anivon’ny komity mpitantana no hisantarana ny fandaharam-potoana. Izany dia hotontosaina ny faha-29 ny volana desambra izao. Aorian’izay, hiditra amin’ny fifaninanana hiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, kempo sy MMA, ireo mpikatroka, ny faran’ny volana martsa 2019.
Fa anisan’ny ady goavana hatrehan’ny mpikatroka malagasy amin’ity taom-pilalaovana 2019 ity ihany koa ny fifaninana iraisam-pirenena. Handray anjara amin’ny fiadiana ny tompondaka manerantany amin’ny taranja Kempo hotontosaina any Madrid, ny volana aprily 2019, mantsy i Madagasikara. Fanamby goavana apetraky ny komity mpitantana ny kempo sy MMA eto an-toerana ny fiatrehana ity fifaninanana lehibe ity ary antenaina fa hitondra fivoarana eo amin’ny taranja Kempo eto Madagasikara. Efa manomboka hita ihany koa ankehitriny ny fitomboan’ny traikefan’ireo mpikatroka malagasy. Mazoto manatrika ny fampiofanana karakarain’ny komity mpitantana rahateo izy ireo ka vetivety dia mahita fivoarana, raha ny fanazavana nentin’ny filohan’ny komity mpitantana, Rakotonindriana Parfait.